Maxay Lacageed Amaah ah? Qeexidda ereyga maaliyadeed
Start daymaha -Leaks daymaha madaxfurashada
Waa maxay deyn codsiga?
Ein daymaha madaxfurashada waxaa ka mid ah erayga "kharashka", taas oo macnaheedu yahay qaybta maaliyadeed sida "isticmaalka go'an" oo sidaas awgeed maaha mid si xor ah loo tuurayo. Kani waa kaalmo dawladeed, kaas oo lagu marayo Länder ama dawladaha hoose. Ka-faa'iideystayaasha Vantöraufbau ee Kreditstalt für Wiederaufbau waa inta badan qoysaska carruurta leh ama dadka u baahan daryeel caafimaad kuwaas oo hore u lahaan jiray ama doonaya inay helaan guri. Amaahda waxaa lagu go'aamiyaa dakhliga reerka, waana in dib loo bixiyaa kiis kasta. Si aan u dallacin deyn-bixiyeyaasha aad u badan, deynta lagama-bixiyo qaybaha, sida kiisaska amaahda, laakiin mar dambe. Habkan, codsadayaashu waa in ay noqdaan kuwo dhaqaale ahaan lagu nastay marxaladda ugu horreysa ee is-beddelka ama iibsashada guri. Faa'iidada kale ee muhiimka ah waa dulsaarka dulsaarka dhexdhexaadka ah, taas oo si cad ujirta amaahda bangiga guriga.
Amaahda Hantidhowrka Guriyeynta
Haddii qoysku go'aansado inuu iibsado guri ama uu dhiso, wuxuu ku hubin karaa in dalabka deynta la heli karo iyo in kale. Tani waxay ka caawineysaa maalgelinta, gaar ahaan xirida khariidooyinka maaliyadeed. Gobolku wuxuu tixgeliyaa qiimaha hantida. Dhinaca kale, tani waxay ku tiirsan tahay aagga, sababtoo ah meesha ay ku yartahay meel nololeed, taasi waxay abuureysaa meel nololeed oo mustaqbalka ah. Muwaadiniinta kali ah waxay ka faa'iideystaan ​​wadaxaajoodka iyo gobolka marka ay si joogto ah u degaan. Tixgelin kale waa tixgelinta xaaladaha deegaanka. Xayawaan fiican, tusaale ahaan, ayaa sidoo kale lagu hormariyaa guryaha jira waana in loo qorsheeyaa dhismaha cusub. Tani waxay hoos u dhigeysaa qiimaha tamarta.
Amaahda kharashka sidoo kale waxay u adeegtaa jiilka. Ku noolaanshaha dhowr qarniyadood oo ka hooseysa hal saqaf, waa is-caddayn in hantida loo qoondeeyay inay noqoto xakam la'aan. Dhammaan jiilalka, jiilalku waxay ugu fiicnaan doonaan da'da waayeelka waxayna ku xiran yihiin xannibaad la'aan. Tallaabooyinkani waxay la xiriiraan gurmadka guryaha aqalka oo badan, helitaanka rampage ee guriga iyo degaanka, dhismaha unugyada qoyan sida barkadda iyo jikada.
Isbedelka tamarta la cusboonaysiin karo ayaa sidoo kale habboon. Qofkasta oo weli wiigsan leh qashinka qubeyska ah ee gurigiisa ayaa la siiyaa fursad uu ku hubiyo tamartiisa iyada oo loo marayo shooladda biyaha. Helitaanka dhirta photovoltaic ayaa sidoo kale kor u qaadaya. Ujeedadu waa in wax laga qabto isbeddelka cimilada iyada oo loo marayo qiiqa hoose.
Halka raasumaalka arjiga loo codsanayo
Deynta deynta waxaa badanaa si toos ah loogu daboolayaa maalgelinta hantida maguurtada ah ee maamulka hantida maguuraanka ah. Hamburg, tusaale ahaan, bangiga maalgelinta iyo taageerada (IFB) ayaa ka masuul ah maalgelintan. Gudaha NRW, dhanka kale Bangiga NRW wuxuu mas'uul ka yahay horumarinta guryaha bulshada. Magaalada Munich, macluumaadka waxaa si toos ah looga heli karaa degmada. Dhammaan baayacmushtarada guryaha iyo lataliyayaasha ka socda waaxdan waxay kaloo u adeegaan lammaanayaal xiriiro.
Qaababka dib u bixinta ayaa si gaar ah muhiim ugu ah codsadayaasha. Kuwani waxay ku xiran yihiin maalgelinta iyo xaaladaha gobolka. Saldhigga waxaa lagu qeexay sharci dejinta, laakiin wadamadu waxay xaq u leeyihiin inay la qabsadaan shuruudaha qaarkood xaaladaha goboleed. Muddada dib u bixinta ayaa bilaabmaysa celcelis ahaan sannadkii shanaad ee deeqda. Amaahda dalbashada looma soo saarin mid ka mid ah gumaadka, laakiin waxay kordhin kartaa sanadaha 16, sida tusaale ahaan Hamburg. Sanadihii ugu horreeyay ee 20 ee dib u bixinta, heerka dulsaarka ayaa hooseeya. Qof kasta oo u baahan dib-u-bixinta dheeraadka ah ee deynka badan waa inuu filaa kororka dulsaarka.
Maqaalka horeAmortiska aan caadiga ahayn
Maqaalka xigtasi maalgelinta